संघीयतालाई पंगु बनाउन खोजिएकै हो त ? « janaaasthanews
संघीयतालाई पंगु बनाउन खोजिएकै हो त ?
प्रकाशित मिति : १२ कार्तिक २०७७, बुधबार २०:३१
प्रधानमन्त्री ओलीले ‘प्रदेशहरू संघको प्रशासनिक इकाइ हुन्’ भन्नुभयो । प्रधानमन्त्री ज्यूले अर्धसत्य बोल्नुभएको हो । हाम्रा प्रदेश प्रशासनिक इकाइ (एडमिनिस्ट्रेटिभ युनिट) पनि हुन् । तर,त्यति मात्र पनि होइनन् । नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा कार्यकारी शक्ति (एक्जिक्युटिभ पावर), संसद्को शक्ति (लिजिस्लेटिभ पावर) तथा न्यायिक शक्ति (जुडिसियल पावर) दिएका छन् । प्रशासनिक कार्य (एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्ट) मा संसद्को कार्य (लिजिस्लेटिभ एक्ट) र न्यायिककार्य (जुडिसियल एक्ट) पर्दैन । तापनि संघीय शासनको व्यापक राजनीतिक दृष्टिले व्याख्यागर्दा भने प्रशासनिकइकाइपनिभन्न सकिन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीज्यूले संघीयताको मूलमर्म र भावना विपरित साँघुरो पारेर बोल्नुभएको हो । हामीले संविधानमा स्थानीय तहलाई पनि केही स्थानीय खालका सामान्य विवादमा न्यायिक निर्णय दिन उपमेयर वा उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा बन्ने न्यायिक समितिलाई त्यस्ता अधिकार दिइएका छौं । स–साना पारिवारिक वा सम्पत्ति आदिका विवाद सम्भव भएसम्म स्थानीय तहबाटै (तलैबाट) समाधान हुन सकोस् र अदालतमा मुद्दा–मामिलाको चाप पनि कम हुन सकोस् भन्ने उद्देश्यले यसरी न्यायिक अधिकार दिइएको हो । तापनि, अदालतलाई भएजस्तो अन्तिम न्यायिक अधिकार भने दिइएको होइन । यसरी नेपालको संघीयतालाई बुझ्ने र विश्लेषण गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीको तहदेखिनै द्विविधा छन् भन्ने झल्कन्छ ।
नेपालको संघीयताका ‘कालोपोकेहरू’
संघीयतामा अधिकारसहित दायित्वहरूको वितरण गरिएका हुन्छन् । त्यस्ता अधिकार र कर्तव्य प्रशासन, शासन, विकास, भूमिका, सहभागिता, समन्वय र सहकार्य सँगै गाँसिएर गएका हुन्छन् । नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार उल्लेख गरेका छन् । कतिपय साझा सूचीका अधिकार पनि संविधानका अनुसूचीमा राखिएका छन् । मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक तथा समग्र उन्नति र विकासका लागि संघीयता पनि एउटा मोडेल हो । तर, यो मात्र सम्पूर्ण (अनिवार्य) मोडेल भने होइन । संघीयता (फेडलिज्जम) ले मात्र पनि मुलुकहरू विकसित र सम्पन्न भएका भने होइनन् । व्यापकभूगोल, जनसंख्या र अनेक प्रकारका विविधताले भरिएका मुलुकले संघीय शासन लागू गरेपनि चीन, जापान, बेलायतजस्ता जनसंख्या र भूगोलमा ठूला मुलुक एकात्मक (युनिटरी) प्रणालीबाटै तीव्र विकासमा लम्केका छन् । चीन त विश्वमा अमेरिकापछिको दोस्रो समृद्ध मुलुक हो र पहिलो अमेरिकालाई उछिन्ने दौडमा समेत पुगेको छ । बेलायतमा चारवटा भूगोललाई एक खालको संघीयतामा जस्तै अधिकार पनि दिइएका छन् । नेपालको संघीयताको अध्ययन र विश्लेषण गर्दा उल्लिखित मुलुकका अनेक प्रकारका विशेषता र अनुभवसँग समेत तुलना गर्दै अघि बढ्नुपर्ने खाँचो देखिन्छ । नेपालको संघीयताको अनुभव निकै छोटो छ । दशकभन्दा कम समयमै नेपाली संघीय शासनमा अनेक थरी कालोपोके (मकैमा लाग्ने एक प्रकारको रोग जसमा घोगा हुन्छ तर दाना लाग्दैन काला–कालापोकाहरू ऐँजेरूजस्तै उम्रिन्छन्) । के नेपाली शासक र राजनीतिक नेतृत्वका मानिसले संघीयता नबुझेकै हुन् त ? के नेपाली संघीयतामा पनि यस्तै कालोपोकेहरू उम्रन लागेका हुन् त ? के नेपालमा संघीयतालाई शासकहरूले अधिकारै–अधिकार भएको शासन प्रणाली भन्ने भ्रम पालेकै हुन् त ? के नेपालको भौगोलिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्थाले संघीयता ल्याउने अवस्था नभएकै प्रमाणित भएकै हो त ? यस्ता खालका अनेकथरी सवाल र प्रश्नबाट नेपाली संघीय शासन अघि बढिरहेको छ ।
संघीयतामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (देश र नमुनाअनुसार) अधिकार तथा दायित्व बाँडिएका हुन्छन् र छन् । कानुनी र विधि शास्त्रीय मान्यताले पनि जहाँ अधिकार हुन्छ त्यहाँ कर्तव्य जोडिएकै हुन्छ भन्छ । तर, नेपाली संघीयता र शासनमा विजयी भएका राजनीतिक नेतृत्वका अधिकांश व्यक्तिले आ–आफ्ना तहमा व्यापक र असीमित अधिकार भएको सम्झे, बुझे, भ्रम पाले र व्यवहार गर्दै आए ।
माथि चर्चा गरिएजस्तो कार्यकारी, संसदीय र न्यायिक अधिकार सबै तहमा संविधानले तोकिदिएका छन् । तर, त्यो असीमित होइनन् र हुन्नन् । आफ्नो तहको कानुन बनाउने अधिकार भएको सभा वा संसद्को बहुमतवादुईतिहाइले पनिआफूलाई लागेको (मन लागेको) कानुन बनाएर लागू गर्न सक्दैन । आफूखुसी कानुन बनाएपनि त्यो कानुनी र विधिशास्त्रीय मूल्यबाट कानुन हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा सर्वाेच्च अदालतको व्याख्याबाट खारेज पनि हुन सक्छन् । संघीय संसद्ले विगतमा आफूलाई आजीवन पेन्सन पाउने गरी बनाएको कानुन (दुई तिहाइको समर्थन) यही विधिशास्त्रीय मान्यताबाट खारेज भएको हो । हाम्रा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि यस्तै गर्न थाले । आफूलाई आफ्नो क्षेत्रको आर्थिक–सामाजिक अवस्था र यथार्थताले नधान्ने खालका ‘गाडी–घोडाहरू’ जोडे । असीमित सुविधा लिए । कानुन बनाएर वा सबैको समर्थन भएपछि जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने भ्रमले निर्वाचितलाई अन्धो बनाइरहेकाले संघीयतामा कालोपोकेहरू देखिएका हुन् र आलोचनाहरू आएका हुन् । खसीमा कर लगाउने, काउलीमा कर लगाउनेजस्ता कर असुलीका उपाय गर्दै आफूूखुसी भत्ता, सुविधा र आर्थिक व्यय गर्दै गर्ने हो भने संघीयताको सामान्य जनतालाई के अर्थ ? पहिलो कुुरा त संघीयता अधिकारै अधिकारको शासन नभई अधिकार र कर्तव्य भएको, जनतामा आधारित सहभागितामूलक शासन, पारदर्शिता, अनुशासन, जिम्मेवारी आदिबाट सञ्चालन हुने शासन प्रणाली हो भन्ने मान्यता सम्झनुपर्छ । हाम्रो संघीयतामा पनि प्रत्येक तहका दायित्व छन् । शासन गर्नु बृहत् अर्थमा अधिकार होइन दायित्व हो । निर्वाचित हुनु राजनीतिक दर्शनको हिसाबले अधिकार पाउनु मात्रै होइन, सार्वजनिक र सामाजिक दायित्व र भूमिका निभाउनु हो । विश्वमा भौगोलिक आवश्यकता, सामाजिक–राजनीतिक आवश्यकता, जनसंख्याको बाध्यता, विभिन्न खालका विविधतालाई सम्बोधन गर्न आदि कारणले संघीय शासन लागू गरिएका छन् । नेपाली संघीयता कुन मान्यताले लागू गरिए ? यसरी हेर्दा नेपालमा राजनीतिक मुद्दा बनाइयो र राजनीतिक उद्देश्यले मात्र संघीयता लागू गरियो । हाम्रो भूगोल औसत र सामान्य हो । जनसंख्या जम्मा ३ करोड (करिब) हो । आर्थिक क्षमता के कति हो हामीले अनुभव गरेकै छौं । अब अन्य आवश्यता नभएपनि राजनीतिक आवश्यकताले हामीले संघीयता लागू गरेका हौं । ठीकै छ मुलुकले संविधानसभाबाट जारी गरेको (जनताले बनाएको संविधान) बाटै संघीयता लागू गरेकाले केहीलाई चित्त नबुझेपनि यो हाम्रो आफ्नो व्यवस्था हो, प्रणाली हो र शासन हो । खाली हाम्रा शासन सञ्चालन गर्ने र शासनमा विजयी भएकाहरूले कसरी संघीय शासनलाई बुझे र व्यवहारहरू गर्दै आए यो मूल सवाल हो । झाडापखाला लागेका बेला जीवनजल खान नसक्ने, ज्वरो आउँदा सिटामोल किन्न नसकेर चारकोस टाढाको सरकारी स्वास्थ्यचौकीमा सित्तैमा औषधि खोज्न एक दिन हिँड्ने, चामलको भात खान दसैं पर्खनुपर्ने देशमा संघीयताको नाममा र स्थानीय तहमा विजयी भएको बहानामा आफूखुसी कानुन बनाउने र सेवा–सुविधा र गाडी–घोडा खरिद गर्दैै टेबुलमाथि चढेर पुलिसको सलामी खाने गर्न थाल्यौँ भने हाम्रो संघीयता कस्तो होला ? यस्तै खालका बुझाइ, हर्कत र पदाधिकारीका व्यवहारले नै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तै ‘प्रशासनिक इकाइ’ को हैसियतबाट माथि उठ्न सक्ने अवस्था देखिन्न । संघीयतालाई मुलुकको बृहत् राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक तथा जनताको आफ्नो शासन प्रणाली बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विजयी भएका तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले भूमिका खेल्नुपर्ने होइन ? के संघीयता सबै मिली ‘बाँडीचुँडी खाने’ प्रणाली हो ? हामीले कस्तो संघीयता चाहेका हौं ? अमेरिकी मोडेलको संघीयता कि ? स्विजरल्याण्डको जस्तो कि ? तन्नम नाइजेरियाको जस्तो संघीयता कि ? भारतको जस्तो ?
नेपालमा संघीयता लागू भएको दशक नपुग्दै अनेकथरी कालोपोके देखिनु चिन्ताको विषय हो । हाम्रा अध्ययन–अनुसन्धान गम्भीर भएर यसमा नलाग्ने हो भने संविधानमा राखिएका प्रदेश र स्थानीय तह संघको प्रशासनिक इकाइमा मात्रै सीमित हुनेछन् । प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै अर्थ र उद्देश्यबाट भन्नुभएको भएपनि नेपालको संघीयतामाथि अनेकथरी कालोपोकेहरू देखिएका छन् । यसलाई समयमै राजनीतिक, वैचारिक, व्यावहारिक, कानुनी, आर्थिक तथा अन्य आवश्वयक उपचार गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । समयमै उपचार नगरे हाम्रो संघीयता पंगु हुन बेर लाग्ने छैन । के हामीले हाम्रो संघीय शासन प्रणालीलाई पंगु बनाउन खोजेकै हो त ?
कम्युनिष्टको झगडा र कांग्रेसको रणनीति
केपी ओलीलाई अप्ठेरो परेको बेला कांग्रेसले सितिमिति साथ दिँदैन, नदिने
नेकपा लिग अफ नेशन्सको बाटोमा पुग्न लागेकै हो ?
प्रेमराज सिलवाल सन् १९१४ देखि १९१९ सम्म विश्वमा पहिलोे विश्वयुद्ध
ओली आउने भनेर गएका, राजावादीले समेत जोरी खोजेका
एक वर्षपछि भएपनि नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई
नेकपाको राजनीति र कुहिराको काग
अस्ति दिउँसो सचिवालय बैठकमा पूरै समय बसे पनि अन्तमा “मैले
आमा छोरी नै ताकेपछि अकल्पनीय अन्त्य
अर्बपतिको ‘मुहान’ मा बल्ल आक्रमण
भैंसेपाटीमा रामकुमारीहरु भिड्दा
‘भाञ्जी पोखरा आउन त, एकछिन भेटौं’
बाटैबाट बामदेव फिर्ता
तुहियो रञ्जन कोइरालाको अन्तिम तयारी !
+977 14442552
Dillibazar Height (Near trinity int"l college and Bhojan Griha), Kathmandu-31, Nepal
© 2020 janaaasthanews